01 / 07 / 2021 15 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 560 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 30414 မင်းသမီး Emma ရဲ့မှော် Box, 30568 စကိတ်, ၄၀၂၅၄ Nutcracker, 40410 ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခွန်ဆက်, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက်, အုတ်ခဲ, BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, City, Disney, Friends, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Ideas, Lego, Lego CIty, Lego Disney, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego Ideas, Lego VIP, LEGO.com, ဥပဒေ, အဆိုပါ LEGO Group, VIP
ဇူလိုင်လကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီမှာအသစ်သောအသစ်စက်စက်ပါပဲ Lego ဒီလကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းလာမယ့်သတ်မှတ်, သဘောတူညီချက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
နွေရာသီအလယ်ပိုင်းသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သည့်ကာလဖြစ်နိုင်သည် Lego ပြက္ခဒိန်သည် bookend သည့်လများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကများစွာရှိသည် အသစ်အစုံ ဇွန်လတွင်စတင်ခဲ့သည် စျေးကွက်အများစုမှာ၊ သြဂုတ်လမှာသူတို့ကအမေရိကန်ကိုလိုက်သွားမယ်၊ ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လမှာသင့်ရဲ့ ၀ င်ငွေရရှိနိုင်တဲ့ ၀ င်ငွေကနေသင့်ကိုသွေးဆောင်ဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ပုံမှန်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအသစ်စက်စက်ကိုပုံမှန်ဖြန့်ချိခြင်းအပြင် (သူတို့လစဉ်မစတင်ခဲ့သည့်အချိန်ကိုသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း) သင့်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတွက်အကြောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ Lego တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသို့ ၀ င်ငွေရရှိနိုင်သည့်အတွက်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာမင်းသိထားသင့်တာမှန်ပါတယ်။
ရုံအကြောင်းကိုပြန်လည်ကောင်းမွန် ဇွန်လရဲ့တိုက်ခိုက်မှု of အသစ်အစုံ? ဂရိတ် - ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဟာပိုများတဲ့အရာတစ်ခုလုံးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါက Lego မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ထုတ်ကုန်အသစ်ငါးခုသည်အနည်းဆုံး ၅ ခုသာရရှိခဲ့သည် LEGO.comကနေ 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား သို့ 43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက်, သင်သည်လည်းပယ်ချပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုရနိုင်နေစဉ် Lego Ideas BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်သည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အပြည့်အဝစာရင်း browse ရန်။
သေးငယ်တဲ့ buildable ဖိနပ်
အရွယ်ပြည့်သလား 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား မင်းစုဆောင်းမှုနဲ့အံကိုက်လား၊ မဆိုင်လား၊ ဒီလက်ဆောင်နဲ့အတူပါ ၀ င်တဲ့လက်ဆောင်သေးသေးလေးကိုမင်းလိုချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ၄၀၄၈၆ adidas မူရင်းစူပါစတားတစ် ဦး ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောသို့တည်ဆောက် Lego ၎င်း၏ဖိအားနှင့်၎င်း၏အစ်ကိုထံမှပျောက်ဆုံးနေခဲ့သော minifigure ပါဝင်သည်။ မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုပိုင်ဆိုင်သည် Lego ဇူလိုင်လ 95 မှဇူလိုင်လ 85 မှတဆင့်£ 95 / $ 1 / € 20 ၏ဝယ်ယူမှု။
အဆိုပါ Lego Group သည်ဇူလိုင်လတွင်ခရစ္စမတ်၏အယူအဆနှင့်မရင်းနှီးပါ။ ယခင်ကမြောက်ပိုင်းခြမ်းအတွက်နွေရာသီတွင် 40254 Nutcracker ကဲ့သို့ရာသီအလိုက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ မူလက p အဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ထားသောချစ်ခင်စွာပြုလုပ်ထားသော diorama ၄၀၄၁၀ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းစ်အခမ်းအနားဖြင့်ယခုနှစ်လမ်းကြောင်းသစ်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်art 2020 ရဲ့အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထိမ်းအမှတ်များ၏။ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိကောက်ယူရန်အတွက်ပေါင် ၁၅၀ / ဒေါ်လာ ၁၅၀ / ယူရို ၁၅၀ သုံးရမည်။
GWP ၏အရည်အချင်းပြည့်မီသောအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာ၏စျေးနှုန်းချိုသာသည့်အဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည် Friends 30414 မင်းသမီး Emma ရဲ့မှော် Box နှင့် CITY 30568 စကိတ်။ တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီး£ 40 / $ 40 / € 40 သုံးစွဲ Lego ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှ ၂၅ ရက်အတွင်းသင်ရွေးချယ်မှုသည်သင့်အားရွေးချယ်လိမ့်မည် ပိုးအိစံ.
အခမဲ့ LEGOLAND လက်မှတ်တွေ
ယခု မှစ၍ သြဂုတ်လ ၈ ရက်အထိ၊ သော့ခတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်တိုင်မည်သည့်ဝယ်ယူမှုမဆို LEGOLAND ဥယျာဉ်များအတွက် '၀ ယ်ယူခြင်းတစ်ခုတည်းအခမဲ့' ဘောက်ချာအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မည်။ စာရေးနေချိန်တွင်ဤသဘောတူညီချက်သည်အမေရိကန်တွင်သာဖြစ်ဟန်တူသော်လည်းအခြားစျေးကွက်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက signups အသစ်များအတွက်သီးသန့်အပြာရောင် VIP keychain သည်ဇူလိုင်လတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဖြစ်သည်art ၏ Lego Group ၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်တွင်ဝင်ရောက်ရန်ပိုကောင်းသောအချိန်မရှိပါ။ ထိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများအပြင် ၀ ယ်ယူမှုတွင်ရမှတ်များလည်းသင်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အနာဂတ်အမှာစာများနှင့်သီးသန့်ဆုများအတွက်သုံးစွဲနိုင်သည်။